Yintoni umvavanyi wamatye anqabileyo? Umvavanyi wedayimani? Uhlaziyo olutsha ngo-2021
Akukho mhloli wecala othembekileyo onokuthenjwa. Kukho ezininzi zeemodeli, kodwa ngokwenene bavavanya ubunzima, ezingabonakali ubungqina betshe.
Ngelishwa, le ngenye yezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswe ngabadayisi begatye.
Ukuba ujonga emfanekisweni uza kubona irula enamanani aqala ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ngo-1, 2, 3, 4, 5….
Iimpawu ze-LED zikhanya xa uthabatha ubuso bomhlaba. Unokubona inombolo ehambelana nobunzima beli litye.
Le ngcaciso ichanekile. Le yayizilinganiso yobunzima, ebizwa ngokuba ngumlinganiselo we-Mohs
Imizekelo yobunzima obukhulu be-Mohs
2 - Isigypsum
4 - ifluorite
9 - iCorundum
Isikali se-Mohs sobunzima bezimbiwa sisekwe kubungakanani besampulu enye yezimbiwa. Iisampulu zento esetyenziswe nguMohs zizonke iiminerali ezahlukeneyo. Izimbiwa ezifumaneka kwindalo zizinto ezinyulu nezicocekileyo. Kwakhona enye okanye ezininzi iimaminerali zenza amatye. Njengeyona nto inzima eyaziwayo ngokwenzeka ngokwendalo, xa u-Mohs adale isikali, iidayimani ziphezulu kwisikali.
Ubulukhuni bento ilinganiswa ngokuchasene nesikali ngokufumana eyona nto inzima elityeni, thelekisa nezinto ezithambileyo ngokukrwela umbandela. Umzekelo, ukuba ezinye izinto zinokukrwitshwa yi-apatite kodwa ingekho nge-fluorite, ubunzima bayo kwisikali se-Mohs buya kuwa phakathi kwe-4 kunye ne-5.
Ubunzima belitye kubangelwa ukwenziwa kweekhemikhali
Ekubeni ilitye lokubambisana linamakhemikhali afanayo njengelitye lezendalo, esi sixhobo siya kukubonisa ngokukodwa umphumo ofanayo wetshe yemvelo okanye yokwenziwa.
Ke ngoko, idayimani yendalo okanye eyenziweyo iya kukubonisa 10. Irubhi yendalo okanye eyenziweyo iyakubonisa 9. Kuyafana nesafire yendalo okanye yokwenziwa.